Vaovao farany Lingua volana Janoary 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2019 5:08 GMT
Miarahaba ny rehetra! Atolotro anareo ny mikasika ny Lingua volana Janoary 2019.
Tamin'ny fitambaran'io volana io, namoaka lahatsoratra 693 isika, nahasarika mpitsidika 245.693 ary jeripejy miisa 296.948. Nahatratra 262.027 ny mpankafy ny pejy Facebook iombonana Lingua, ary mpanjohy 259.403 tao amin'ny Twitter.
Miara-miasa amin'ny Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Tenin'ny Indizeny 2019 ny Global Voices ankehitriny
Nambaranay ny fitadiavana mpandika teny ho amin'ny teny Holandey, Alemà, Frantsay ary Esperanto . Miangavy anao mba hizara izany any amin'ny tambajotranao!
Nizara ny mombamomba azy ny Tonia Mpanatanteraka mahay fiteny maro , jereo ao!
Nizara ny mombamomba ny toerana hanatanterahan'izy ireo ny fandraisana anjarany ato amin'ny GV ireo mpandray anjara !
Nizara ny antsipiriany momba ny lokan'ny famahanana bilaogy Boukary Konaté voalohany tao Mali i Claire Ulrich, avy ao amin'ny Lingua Frantsay.
Nizara ny fomba hanehoan'ny Wikipediana teny fisaorana amin'ny fiteny samihafa ny ekipan'ny CivilServant.
Namoaka ny famoahan-dahatsoratra volana Janoary momba ny vaovaonay mikasika Lingua izahay.
Arabo ar 126.650
Espaniola es 19.623
Frantsay fr 17.476
Arabo ar 42.520
Bangla bn 7.966
Misaotra anareo ry Lingua, manan-danja ny fandikanteny tsirairay! 🙂